मेरा सपनाहरु : एउटी अन लाइन साथी
excellent...अब के नै गर्न सकिन्छ र ? तर साह्रै मन छुने कथा रहेछ ।
सायद मायामा यस्तै हुन्छ । छाँया र माया उस्तै हुन रे नजिक पर्दा नहुने टाढै ठिक । जीन्दगीका पानाहरुमा यस्तै यस्तै हुन्छन् । यहाँको कथाका भावनालाई यति त हो पाठकले भन्ने कुरा हैन र ?
You never know what's next on your journey of life...Nice!